လူငယ်များဦးဆောင်ကျင်းပသော လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးစခန်းသို့အလှူငွေထည့်ကြပေးပါရန် | Su See Yar
ပင်မစာမျက်နှာ / လူငယ်များဦးဆောင်ကျင်းပသော လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးစခန်းသို့အလှူငွေထည့်ကြပေးပါရန်
IFP(Initiative for Peace) ဆိုတာကတော့ 2001 ခုနှစ်မှာ UWC(United World College) ကနေစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားနှင့် ဆိုင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေး program တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူငယ်များကပဲ ကြီးမှူး ဦးဆောင်ကျင်းပသောပွဲ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူမူအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးကို လူငယ်များအလေးထားလာစေဖို့အတွက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ IFP Myanmar ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ IFP နိုင်ငံတကာပွဲတွေကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူငယ့်ခေါင်းဆောင်တွေက တစ်ခြားသော လူငယ်တွေက်ို မိမိတို့လို ငြိမ်းချမ်းရေးမှာစိတ်ဝင်စားလာဖို့ မျှော်မှန်းကာ ဦးဆောင်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေဟာဆိုရင် သင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်းတွေကိုမရရှိတဲ့အပြင်၊နေ့စဉ်ကြုံတွေနေရတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေ ပဋိပက္ခတွေကိုလည်းဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ သေချာစွာ နားလည်နိင်စွမ်း မရှိတဲ့အခါမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ တန်းတူညီမျှစွာဆက်ဆံမခံရခြင်းတွေ အစရှိသော ပြဿနာများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ IFP ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မတူညီတဲ့နေရာဒေသတွေ၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေကနေလာတဲ့ လူငယ်တွေကို အချင်းချင်းချိတ်ဆက် ပေးပြီး ထိုလူငယ်များကိုငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့နဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ကိုရော မိမိ ဆောင်ရွက်သမျှ အရာတွေကိုပါ ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ အားပေးခြင်းကမှတစ်ဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ် ပါဝင်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ IFP မြန်မာဟာ ပွဲကို ပါဝင်တက်ရောက်လာတဲ့ လူငယ်များကို အဖွဲ့ကြီးတစ်ခု အဖြစ် စုပေါင်းဖွဲ့စည်း ပေးပြီး အဖွဲ့ထဲမှာ လူငယ်တစ်ဦးချင်းစီကို ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်တွေ ကို အချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စေပြီး ပွဲသို့ တက်ရောက်လာ သူတွေ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်အောင် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပြဿနာတွေကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ တက်ကြွစွာ သရုပ်ပြခြင်း၊ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းများ နှင့် အတူ အချင်းချင်း ရင်းနှီးစွာရှင်းလင်းဖလှယ် နိုင်ရန် အသင်းငယ် များဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စသည်တို့ဖြင့် မိမိတို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဖြေရှင်းလာနိုင်အောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ယခုလို IFP Myanmar ကို တက်ရောက်ရာမှ ရရှိလာတဲ့ အသိပညာများကို ပွဲအတွင်းမှာပင် မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ ရပ်ရွာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်များမှာပါ အသုံးချ နိုင်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ project များကို လူငယ်တွေ ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်း သင်ကြားပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေဖြင့် IFP Myanmar ဟာ ဆိုရင် ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော လူငယ်တိုင်းကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်ရှိပြီး ပါဝင်လာသော လူငယ်တစ်ဦးချင်းစီ ကို မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်း အသစ်အဆန်းတွေ တိုးလာစေဖို့လဲ အားပေးလှုံဆော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
IFP Myanmar (Facebook Link)
IFPမြန်မာရဲ့ ပန်းတိုင်ကတော့ လူငယ်များမှ ဦးဆောင်ပြီးလူငယ်များထံသို့ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ပို့ချ ပေးသောပွဲ တစ်ခု ဖြစ်မြောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ကျင်းပရာတွင် လူငယ် အယောက်၅၀ ကို "ကြာရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး" တစ်ခု ကို မိမိ တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အသီးသီးတွင်ပြန်လည် တည်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်လာ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
(၁) ပါဝင်တက်ရောက်လာသော လူငယ်များကို မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးလာစေရန်၊ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားလေးစားလာတတ်စေရန်၊ လူအများနှင့်ဆက်ဆံတတ်လာစေရန်၊ လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေရန်။
(၂) ပါဝင်တက်ရောက်လာသော လူငယ်များကို ပြင်ပ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေသာမက မိမိကိုယ်ပိုင် စိတ်အတွင်း ၌ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေတတ်ရန်၊ ဂရုဏာ တရားနှင့် စာနာတတ်မှုတွေ ရှင်သန်လာနိုင်စေရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို မျှဝေ ခံစား တတ်စေရန်။
(၃) ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တတ်သော စွမ်းရည်တွေ၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်း နိုင်သော စွမ်းရည်တွေ၊ အငြင်းပွားဖွယ်များကြုံလာသောအခါတွင် မည့်သို့ စီမှန်ခံ့ခွဲ ရမည်ဆိုသော စွမ်းရည်တွေ နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တွေ ကို တိုးတက်လာစေရန်။
(၄) မိမိကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲတွေ၊ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော ပြဿနာတွေ ကို အခြား သူများဖြင့်ဝေမျှနိုင်ရန်၊ အခြားသူများ​၏ ပြဿနာများကိုလည်း နားထောင်တတ်ရန် နှင့် ထိုသို့သော စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသော အခါ ဖြေရှင်း နိုင်မည့် နည်းဗျူဟာ များ ဖန်တီးတတ်ရန်။
(၅) မတူညီသောနေရာဒေသ မှ လူငယ်တွေ ကိုပေါင်းစည်းထားသော နေရာဖြစ်တဲ့ အတွက် အခြားသူများ​၏ ကွဲပြားသော ဓလေ့ ထုံးတန်းတွေကိုလည်းလေ့လာ နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူငယ် အချင်းချင်း​၏ မတူညီသော ရိုးရာတွေကိုလည်း နားလည် လေးစား လာနိုင်ရန်။
(၆) ပွဲကြီးပြီးဆုံး သွားသော အခါတွင်လည်း လူငယ်တစ်ဦးချင်းစီမှ မိမိတို့​၏ သက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲမှု အသစ်များ စီမှန် ချမှတ်လာ နိုင်စေရန်။
ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျမှုငွေစာရင်း အချက်အလက်
ကျွန်ပ်တို့၏ ခန့်မှန်းခြေ စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်ဟာဆိုရင် ကွန်းဖရင့်မတိုင်ခင် အထွေထွေပြင်ဆင်စရိတ်နှင့်၊ ကွန်းဖရင့်ကျင်းပစဉ် သင်တန်းသား အယောက် (၃၄)ယောက် နှင့် ထိုသင်တန်းသားများအား နည်းပြပေးသူ(၁၆) ယောက်တို့ ပေါ်တွင်မှုတည်၍ တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့တွက်ချက်ချက်အရ ခန့်မှန်းခြေ စုစုပေါင်းကုန်ကျမှုမှာ
(၁၄ ,၈၄၁, ၀၀၀)ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေစာရင်းတွင်ပါဝင်သော ကုန်ကျမှုတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကွန်းဖရင့်တွက် လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် တန်ဆာပလာများ
ကွန်းဖရင့်မတိုင်ခင် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများအတွက် အထွေထွေအသုံးစရိတ်များ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ပ်တို့၏ IfP Myanmar သည် မတူညီတဲ့ ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ IfP Myanmar သည် လူငယ်များအား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည့်ဝေါဟာရနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ် ရက်တို သင်တန်းများ၊ conference များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကဲ့သို့ကျင်းပနိုင်ရန် IfP Myanmar သည် ကျပ်ငွေ(၁၄ ,၈၄၁, ၀၀၀)ခန့် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် IfP Myanmar သည် အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေတနာရှင်များ မှ ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်အားကိုးရပါသည်။
Su See Yar crowd funding campaign မှ Expected funding သိန်း ၁၀၀ ထိ မျှော်လင့်ထား ပါသည်။ ဤပမာဏအပြင် လိုအပ်သော ရန်ပုံငွေအား ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ပါက အလွန်ပင် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါလိမ့်မည်။ စေတနာရှင်များ၏ ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုသည် IfP Myanmar အား ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းပေးနိုင်မည့် အားအင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ASEAN ကျောင်းသားများနှင့်Camp စီစဥ်ဆောင်ရွက်သောလူငယ် ၅၀ အတွက်
မနက်စာ (Camp ၆ ရက်စာ) = ၄၅၀,၀၀၀ (လေးသိန်းငါးသောင်းကျပ်)
နေ့လည်စာ ( Camp ၆ ရက်စာ) = ၈၇၅,၀၀၀(ရှစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းငါးထောင်)
ညစာ (Camp ၆ ရက်စာ) = ၈၇၅,၀၀၀(ရှစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)
နေထိုင်ရေးစရိတ် (Camp ၆ ရက်စာ)=၆,၂၅၀,၀၀၀(ခြောက်ဆယ့်နှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်တိတိ)
conference ခန်းငှားခ (Camp ၆ ရက်စာ)=၆၀၀,၀၀၀(ခြောက်သိန်းကျပ်တိတိ)
IFP တီရှပ် = ၂၇၅၀၀၀ (နှစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)
Facilitators များအသုံးပြုရန်စာဆောင်ငယ် = ၁၆၀၀၀ (တစ်သောင်းခြောက်ထောင်)
Delegates များအသုံးပြုရန်စာဆောင်ငယ် = ၁၆၀၀၀(တစ်သောင်းခြောက်ထောင်ကျပ်)
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့်စာရေးကိရိယာများ = ၃၀၀၀၀၀ (သုံးသိန်းကျပ်)
Delegates လူငယ်များနှင့် ကူညီပါဝင်ပေးသူများအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် = ၇၅၀၀၀(ခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)
စုစုပေါင်း campaign တွက်လိုအပ်သောအသုံးစရိတ် =၉,၈၈၆,၀၀၀ (ကိုးဆယ့်ရှစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ခြောက်ထောင်ကျပ်တိတိ)
IFP Myanmar အကြောင်း အောက်ပါ IFP websiteတွင် အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်) အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း COVID 19 က student exchange အစီအစဉ်များအတွက် နှောင့်နှေးမှုတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ IFP စီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုရှိလာတာကြောင့် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်သွားသည်အထိရွှေ့ဆိုင်းရန် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလကျွန်တော်တို့ ဤကွန်ဖရင့်ကိုမကျင်းပနိုင်တော့ပေမဲ့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ အလှူရှင်တွေဖြစ်တဲ့ လူကြီးမင်းတို့ထံ ဘယ်လို စီစဉ်သွားမယ်ဆိုတာကို ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်။
90,000 MMK Funded
100L MMK Goal
Hein Thu Soe
I amayoung leaner who loves Myanmar. I am always eager to beapart of community projects that have social impacts. I have taken parts in youth projects over 1 year. I have represented Myanmar twice in exchange programs to Japan last year. Currently, I am having an intern as an impact writer at Development Innovation Insider andanon-staff translator at UNICEF Myanmar. I am also taking responsible in some projects and asaco head at IFP ( Initative for Peace Myanmar 2020. ) Despite the delay due to the COVID 19, we, all 16 organizers of IFP believes that the camp must go on taking safety measures after 1 year of contribution to it.
No.(148) Htee Tan Road, Kyee Myin Tine Township, Yangon
5000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( Individual )
5000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
15000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
15000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏အမည်ကိုလဲ ifp Myanmar website တွင်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
30000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
30000 MMK ဒာထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏အမည်နှင့်တကွ ကျေးဇူးတင်စာအား ifp Myanmar website နှင့် facebook page တွင်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
50000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
50000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏အမည်နှင့်တကွ ကျေးဇူးတင်စာအား ifp Myanmar website နှင့် facebook page တွင်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် e-donar ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုပါ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ ၅သောင်းကျပ် (သို့) ၃၅ ဒေါ်လာ လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
(မြန်မာငွေ ၅သောင်းကျပ် ကို ထောက်ပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ သည် ကျွန်ပ်တို့ IFP Myanmar ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းရန် အားအင်တွေပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ) (ကျွန်ပ်တို့ IFP Myanmar ကို မြန်မာငွေ ၅သောင်းကျပ် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။) ပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်တော်တို့ IFP Myanmar မှ Thank you email ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
100000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
10000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏အမည်နှင့်တကွ ကျေးဇူးတင်စာအား ifp Myanmar website နှင့် facebook page တွင်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် e-donar ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အတူ IFP Myanmar တီရှပ် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
200000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
200000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးခြင်း ၊ လူကြီးမင်း၏အမည်နှင့်တကွ ကျေးဇူးတင်စာအား ifp Myanmar website နှင့် facebook page တွင်ဖော်ပြပေးခြင်း ၊ e-donar ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အတူ IFP Myanmar တီရှပ်ချီးမြှင့်ခြင်းအပြင် IFP Myanmar တွင်ပါဝင်သော အာဆီယံကျောင်းသူကျောင်းသားတ်ို့ကိုယ်တိုင် တင်ဆက်ပြသမယ့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အခမ်းအနားပိတ်ပွဲတွင် လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်စွာ ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
300000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
300000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာကို email ဖြင့်ပို့ပေးခြင်း ၊ လူကြီးမင်း၏အမည်နှင့်တကွ ကျေးဇူးတင်စာအား ifp Myanmar website နှင့် facebook page တွင်ဖော်ပြပေးခြင်း ၊ e-donar ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အတူ IFP Myanmar တီရှပ်နှင့် ချီးမြှင့်ခြင်းအပြင် IFP Myanmar တွင်ပါဝင်သော အာဆီယံကျောင်းသူကျောင်းသားတ်ို့ကိုယ်တိုင် တင်ဆက်ပြသမယ့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အခမ်းအနားပိတ်ပွဲတွင် လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်စွာ ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက IFP Myanmar ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့၏ ကလေးများအား အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခြင်း၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ကူညီခြင်း အစရှိသဖြင့် တာဝန်တွေလုပ်သည့်နေ့ ( service day ) တွင် လူကြီးမင်း လာရောက်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
မြန်မာငွေ ၃သိန်းကျပ် လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ ၃သိန်းကျပ်ထိ ထောက်ပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီနာမည် (သို့) အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကို ကျွန်ပ်တို့ IFP Myanmar website မှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
500000 MMK ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက် ( individual )
500000 MMK ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များအတွက် အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအပါအဝင် ရန်ကုန်မြို့အထင်ကရနေရာများအား တစ်ရက်တာ လမ်းလျှောက်လှည့်လည် ကြည့်ရှူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ ၅သိန်းကျပ် လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ ၅သိန်းကျပ်ထိ ထောက်ပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီနာမည် (သို့) အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကို ကျွန်ပ်တို့ IFP Myanmar website နှင့် facebook page တွင် ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ ၈သိန်းကျပ် လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ ၈သိန်းကျပ်ထိ ထောက်ပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် ကျွန်တော်တို့ IFP Myanmar မှ လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်အကျဉ်းချုံး (သို့) အဖွဲ့အစည်းမိတ်ဆက် အကျဉ်းချုံး ကို ကျွန်တော်တို့ IFP Myanmar website နှင့် facebook page တွင် ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ဟာဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်ပ်တို့ IFP Myanmar မှချီးမြှင့်မည့် လှုဒါန်းမှုအသိအမှတ်ပြု အီလက်ထရောနစ်ဂုဏ်ပြုလွှာကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ ၁၀သိန်းကျပ် လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ ၁၀သိန်းကျပ်ထိ ထောက်ပံ့သော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများသည် အထက်ပါဖော်ပြချက်များအပြင် social media marketing announcement များ၊ ကျွန်ပ်တို့ camp စင်နောက်ခံအပြင်အဆင်တွင် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ (medium-size) Logo နှင့် နာမည်ကို ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ Logo(small size) ပါဝင်သည့် IFP တီရှပ် နှင့် IFP booklet ကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ ၃၅ သိန်းကျပ် လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ ၁၀သိန်းကျပ်ထိ ထောက်ပံ့သော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများသည် အထက်ပါဖော်ပြချက်များအပြင် (ကျွန်ပ်တို့ camp စင်နောက်ခံအပြင်အဆင်တွင် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ (medium-size) Logo နှင့် နာမည်များထည့်သွင်းခြင်း၊ လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ Logo(medium size) ပါဝင်သည့် IFP တီရှပ် နှင့် IFP booklet များအား အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိခြင်း) ကျွန်ပ်တို့ camp ရဲ့ Cultural Night (အာဆီယံ delegate တွေရဲ့ ကပြဖျော်ဖြေမှုများ၊ အာဆီယံအငွေ့အသက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် သက်ဝင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်) နှင့် Service day (delegate များ ကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်အားပေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း) သို့ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Camp အတွင်း နားနေချိန်များတွင် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် promo video clipလေးကို ဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀ ပါဝင်လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀ထိ ထောက်ပံ့ကူညီပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများသည် အထက်ပါဖော်ပြချက်များအပြင် (နောက်ဆုံးရက် delegate များနှင့် sponsor company, donor များအားအသိအမှတ် ပြု certificate awarding and appreciation အခမ်းအနားတွင်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သတ်သည်များကို ပြောဆိုရန်အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာငွေ သ်ိန်း ၇၀ ပါဝင်လှုဒါန်းမှုအတွက် ( COMPANY or ORGS )
မြန်မာငွေ သိန်း ၇၀ ထိ ထောက်ပံ့ကူညီပေးသော ကုမ္ပဏီများ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများသည် အထက်ပါဖော်ပြချက်များအပြင် (ကျွန်ပ်တို့ camp စင်နောက်ခံအပြင်အဆင်တွင် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ (large-size) Logo နှင့် နာမည်များထည့်သွင်းခြင်း၊ လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ Logo(large-size) ပါဝင်သည့် IFP တီရှပ် နှင့် IFP booklet များအား အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိခြင်း) Yangon Day Walking Tour သို့ ပါဝင်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရမှာဖြစ်ပါသည်။